Gaas & C/raxmaan C/Shakuur oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Nairobi - Awdinle Online
Gaas & C/raxmaan C/Shakuur oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Nairobi
Ra’iisul Wasaar8hii hore ee Soomaaliya Soomaaliya soo noqday Madaxweynaha Puntland Cabduweli Maxamed Cali Gaas ayaa Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa uu kula kulmay Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Labada mas’uul ayaa waxaa ay ka wada hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka gaar ahaan Arrimaha doorashooyinka iyo Arriimo kale.
“Waxaan maanta kulanay RW hore ee xukuumadii kmg ahayd, ahaana madaxweynihii hore ee Puntland Dr C/weli Cali Gaas. Waxaan ka wada hadalnay doorashada 2020/21. Waxaa aragti isku dhow ka yeelanay hannaanka iyo natiijada doorashada intaba ayuu yiri” Cabdiraxmaan Cabdishakuur.
Magaalada Nairobi waxaa ku sugan Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo Xubno kale oo ka tirsan mucaaradka, kuwaas oo kulamo ka dhan ah Madaxweyne Farmaajo ka wada halkaas.
Previous articleAl-Shabaab oo weeraray Saldhigyada Ciidamada Kenya & dagaal dhacay
Next articleCiidamada Galmudug oo soo afjaray muran ka taagnaa Magaalada Hobyo